၂၀၂၂ ခုနဈ တဈနှဈ စာဟောစာတမျး…ဗုဒ်ဓဟူး သားသမီးမြား အတှကျ – Nyi Ma Lay
By Nyi Ma LayPosted on January 8, 2022
ဗုဒ်ဓဟူးသား သမီး မြားတို့သညျ နှဈကူးစ စိတျသဈ ကိုယျသဈနှငျ့ စိတျကူး သဈဖွငျ့၊ အလုပျမြား ဆောငျရှကျရမညျ။ နိုငျငံခွားခရီး သှား လာခွငျးမြား ကွုံလာတတျသညျ။ မိမိခနျ့အ ပျထားသော အတှငျးလူမြားနှငျ့ ဆကျဆံရေးတှငျ ပွဿနာ ပျေါပေါကျလာ တတျသညျ။
ငှကွေေးနှငျ့ အဖိုးတနျပစ်စညျးမြား ကပြောကျတတျသညျ။ ယခုနှဈတှငျ (16. 1. 2022 မှ စ၍ ( 16. 4. 2022) အထိ မိမိ လုပျငနျးခှငျမြား အောငျမွငျမှုမြား ရရှိလိမျ့မညျ။
အိမျခွံမွေ ရောငျးဝယျခွငျး၊ ယာဉျနှငျ့ ဆကျပစှညျး ရောငျးဝယျခွငျး၊ စားသောကျကုနျ ရောငျးခခြွငျး၊ အုတျ၊ အိမျဆောကျပစ်စညျး လုပျငနျး၊ အုနျးဆီ၊ အုနျးသီးလုပျငနျး၊ အိမျအလှဆငျ လုပျငနျး၊ အိမျငှားလုပျငနျးမြား ပိုမိုဖွဈထှနျးမညျ။
လုပျငနျးကိစ်စ အတှကျ အဂျါ၊ တနဂျနှေ သားသမီးမြားနှငျ့ တှဲဖကျ ဆောငျရှကျရမညျ။
ပညာရေးတှငျ မိမိ ရညျမှနျးခကျြ အထူးထားပွိး အောငျမွငျအောငျ ဆှတျခူးနိုငျမညျ။ နိုငျငံရပျခွားသို့ ပညာသငျယူရနျ အခှငျအရေးမြား ဝငျလာတတျသညျ။
မကွာခဏ စိတျရှုပျထှေးမှုမြား၊ ငှကွေေးအခကျအခဲမြားနှငျ့ သူတဈပါးကွောငျ့ဖွဈသော ပွဿနားမြားကို ဝငျရောကျ ဖွရှေငျးပေးခွငျးမြား ကွုံတှလေ့ာတတျ၏။
သို့သျော နှဈဖကျမိဘဆှမြေိူးသားခငျြးနှငျ့ မိတျကောငျး၊ မိတျသဂျဟမြား မိမိကို အကူအညီမြားပေးမညျ။ ပြိူရှယျသူမြား ခဈြသူတဈယောကျပွိး တဈယောကျ ခဏခဏ ပွောငျးလဲခွငျးမြား ဖွဈနတေတျသညျ။
သို့သျော မိမိဆုံးဖွတျခကျြတဈခု ခမြှတျပွိးမှ လကျခံသငျ့သညျ။ အခဈြရေး ထငျသလောကျ ခရီးမပေါကျနိုငျပါ။ အိမျထောငျရှငျမြား၊ သားသမီး ရတနာထှနျးကားပွိး စီးပှားရေး တိုးတတျလာမညျ။
အိမျထောငျရေးတှငျ သူတဈပါးကွောငျ့ဖွဈသော ပွဿနာမြားကို ဝငျရောကျ ဖွရှေငျးပေးရမညျ။ အိမျတှငျးရေး ပွဿနာမြား ဖွရှေငျးပေးရတတျသညျ။ ဤနှဈတှငျ ရောဂါဘယအမြိူးမြိူး နှိပျစကျခွငျး ခံရမညျ။
ကနျြးမာရေး တှငျ ဆီးခြိူ၊ အဖြားအနာ၊ အပူနာရောဂါ မြား၊ အရိုးအကွော၊ အကြိတျနာ၊ လေးဘကျနာ၊ ကိုယျခန်ဓာကိုကျခဲခွငျး၊ အကွောတတျ၊ ဗိုကျအောငျခွငျး ရောဂါဝဒေနာမြား ခံစားရ တတျသညျ။
အထူးဟော… အနောကျမွောကျ အရပျ ခရီးသှားခွငျး၊ လူမှုရေးကိစ်စဆောငျရှကျခွငျးမြား ရှောငျကဉျြပေးပါ။ မိမိလုပျငနျး လုပျဆောငျရာတှငျ မိမိလုပျငနျး လုပျဆောငျရာတှငျ စနေ၊ ဗုဒ်ဓဟူးသားသမီးမြားဖွငျ့ ဆောငျရှကျခွငျးမြား အထူး ဂရုစိုကျပေးပါ။
ငှကွေေးကိစ်စ၊ စာခြူပျစာတမျးမြား၊ အာမခံလကျမှတျထိုးခွငျး ရှောငျကွဉျပါ။
အကြိူးပေးအက်ခရာ – (က၊ လ၊ ထ၊ အ), အကြိူးပေးဂဏနျး – (၂. ၇. ၈. ၃),
အကြိူးပေးအရောငျ – အစိမျးရောငျ၊ ပနျးရောငျ၊ ကွညျပွာရောငျ၊ ဆငျစှယျရောငျ, အကြိူးမပေးနနေံ – (စနေ၊ ဗုဒ်ဓဟူး), အကြိူးမပေးအရပျ – အနောကျမွောကျ
ယတွာ- ဤနှဈလအပတျတိုငျ တဈနှဈလုံး မိမိနနေံ ဂွိဟျဘုရား ဗုဒ်ဓဟူးနနေံနေ့ မိမိမှေးနမှေ့ ခရညှေနျ့၊ သွဇာညှနျ့၊ သပွညှေနျ့ (၉) ညှနျ့စီ
အစိမျးရောငျပနျးအိုးဖွငျ့ ဘုရားပူဇျောပွိး ရှထေီး၊ ငှထေီ၊ တံခှနျကုက်ကား၊ ယပျတောငျ (၇) ခြောငျးနှငျ့ ရှဆေိုငျး ကပျလှူပေးပါ။ အဓိဌာနျဝငျခွငျး၊ ပုတီးစိပျခွငျးမြား ဆောငျရှကျပေးပါ။
#Credit ဆရာကွီးမငျးသူရ အစီအမံယတွာ 📲 09- 751089826(Viber) 📲 09- 767817917 📲 09 792756450
ဗုဒ္ဓဟူးသား သမီး များတို့သည် နှစ်ကူးစ စိတ်သစ် ကိုယ်သစ်နှင့် စိတ်ကူး သစ်ဖြင့်၊ အလုပ်များ ဆောင်ရွက်ရမည်။ နိုင်ငံခြားခရီး သွား လာခြင်းများ ကြုံလာတတ်သည်။ မိမိခန့်အ ပ်ထားသော အတွင်းလူများနှင့် ဆက်ဆံရေးတွင် ပြဿနာ ပေါ်ပေါက်လာ တတ်သည်။
ငွေကြေးနှင့် အဖိုးတန်ပစ္စည်းများ ကျပျောက်တတ်သည်။ ယခုနှစ်တွင် (16. 1. 2022 မှ စ၍ ( 16. 4. 2022) အထိ မိမိ လုပ်ငန်းခွင်များ အောင်မြင်မှုများ ရရှိလိမ့်မည်။
အိမ်ခြံမြေ ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ယာဉ်နှင့် ဆက်ပစွည်း ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စားသောက်ကုန် ရောင်းချခြင်း၊ အုတ်၊ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း လုပ်ငန်း၊ အုန်းဆီ၊ အုန်းသီးလုပ်ငန်း၊ အိမ်အလှဆင် လုပ်ငန်း၊ အိမ်ငှားလုပ်ငန်းများ ပိုမိုဖြစ်ထွန်းမည်။
လုပ်ငန်းကိစ္စ အတွက် အဂ်ါ၊ တနဂ်နွေ သားသမီးများနှင့် တွဲဖက် ဆောင်ရွက်ရမည်။
ပညာရေးတွင် မိမိ ရည်မှန်းချက် အထူးထားပြိး အောင်မြင်အောင် ဆွတ်ခူးနိုင်မည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ပညာသင်ယူရန် အခွင်အရေးများ ဝင်လာတတ်သည်။
မကြာခဏ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများ၊ ငွေကြေးအခက်အခဲများနှင့် သူတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်သော ပြဿနားများကို ဝင်ရောက် ဖြေရှင်းပေးခြင်းများ ကြုံတွေ့လာတတ်၏။
သို့သော် နှစ်ဖက်မိဘဆွေမျိူးသားချင်းနှင့် မိတ်ကောင်း၊ မိတ်သဂ်ဟများ မိမိကို အကူအညီများပေးမည်။ ပျိူရွယ်သူများ ချစ်သူတစ်ယောက်ပြိး တစ်ယောက် ခဏခဏ ပြောင်းလဲခြင်းများ ဖြစ်နေတတ်သည်။
သို့သော် မိမိဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ချမှတ်ပြိးမှ လက်ခံသင့်သည်။ အချစ်ရေး ထင်သလောက် ခရီးမပေါက်နိုင်ပါ။ အိမ်ထောင်ရှင်များ၊ သားသမီး ရတနာထွန်းကားပြိး စီးပွားရေး တိုးတတ်လာမည်။
အိမ်ထောင်ရေးတွင် သူတစ်ပါးကြောင့်ဖြစ်သော ပြဿနာများကို ဝင်ရောက် ဖြေရှင်းပေးရမည်။ အိမ်တွင်းရေး ပြဿနာများ ဖြေရှင်းပေးရတတ်သည်။ ဤနှစ်တွင် ရောဂါဘယအမျိူးမျိူး နှိပ်စက်ခြင်း ခံရမည်။
ကျန်းမာရေး တွင် ဆီးချိူ၊ အဖျားအနာ၊ အပူနာရောဂါ များ၊ အရိုးအကြော၊ အကျိတ်နာ၊ လေးဘက်နာ၊ ကိုယ်ခန္ဓာကိုက်ခဲခြင်း၊ အကြောတတ်၊ ဗိုက်အောင်ခြင်း ရောဂါဝေဒနာများ ခံစားရ တတ်သည်။
အထူးဟော… အနောက်မြောက် အရပ် ခရီးသွားခြင်း၊ လူမှုရေးကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်းများ ရှောင်ကျဉ်ပေးပါ။ မိမိလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရာတွင် မိမိလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရာတွင် စနေ၊ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းများ အထူး ဂရုစိုက်ပေးပါ။
ငွေကြေးကိစ္စ၊ စာချူပ်စာတမ်းများ၊ အာမခံလက်မှတ်ထိုးခြင်း ရှောင်ကြဉ်ပါ။
အကျိူးပေးအက္ခရာ – (က၊ လ၊ ထ၊ အ), အကျိူးပေးဂဏန်း – (၂. ၇. ၈. ၃),
အကျိူးပေးအရောင် – အစိမ်းရောင်၊ ပန်းရောင်၊ ကြည်ပြာရောင်၊ ဆင်စွယ်ရောင်, အကျိူးမပေးနေနံ – (စနေ၊ ဗုဒ္ဓဟူး), အကျိူးမပေးအရပ် – အနောက်မြောက်
ယတြာ- ဤနှစ်လအပတ်တိုင် တစ်နှစ်လုံး မိမိနေနံ ဂြိဟ်ဘုရား ဗုဒ္ဓဟူးနေနံနေ့ မိမိမွေးနေ့မှ ခရေညွန့်၊ သြဇာညွန့်၊ သပြေညွန့် (၉) ညွန့်စီ
အစိမ်းရောင်ပန်းအိုးဖြင့် ဘုရားပူဇော်ပြိး ရွှေထီး၊ ငွေထီ၊ တံခွန်ကုက္ကား၊ ယပ်တောင် (၇) ချောင်းနှင့် ရွှေဆိုင်း ကပ်လှူပေးပါ။ အဓိဌာန်ဝင်ခြင်း၊ ပုတီးစိပ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးပါ။
#Credit ဆရာကြီးမင်းသူရ အစီအမံယတြာ 📲 09- 751089826(Viber) 📲 09- 767817917 📲 09 792756450
Previous post ဆငျခြေးနဲ့ထုတျ‌လုပျသညျ့ ဂငျြ ဒာရကျကို ထူးထူးဆနျးဆနျး ရောငျးခနြတေဲ့ တောငျအာဖရိက
Next post မွငျသူတိုငျး အူတကျသှားစမေယျ့ ကမ်ဘာ့နိုငျငံအနှံ က ရယျရခကျငိုရခကျ ထူးဆနျးယူနီဖောငျးမြား